xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: Eleven Media အယ်ဒီတာချုပ် ဝေဖြိုးက EMG ကိုဝေဖန်သူများအား Facebook မှတစ်ဆင့် ရိုင်းပြ မောက်မာစွာတုန့်ပြန် သဖြင့် မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်
မြန်မာတိုင်းမ်ကလဲ လူတကာလိုက်ရှာနေတဲ့ ဆောင်းပါးလေး ရပြီဟေ့ ဆိုပြီး ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ အရမ်းကြီး ချနှင်းလို့လည်း အချည်းနှီးပါပဲ။ ဦးတင်ထွန်းဦး ကြံဖွံပါတီဝင် ဆိုတာ ပြည်သူတွေသိပါတယ်။ သို့သော်မီဒီယာ တခုအတွက် အပတ်စဉ် လှုပ်ရှားနေသူတွေဟာ ဂျာနယ်ပိုင်ရှင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်က၀န်ထမ်းပေါင်း များစွာ စာရေးဆရာပေါင်း များစွာပါ။ ကိုယ့်ဂျာနယ် လောကသား အချင်းချင်း အနည်းငယ်စောင့်စည်းသင့် ပါတယ်။
ဟိုလူ့ကို အ၀ါရောင် စာမျက်နှာလို့ ခေါ်လိုခေါ် ၊ ဒီလူ့ကို ချနှင်းလိုနင်း ... ဟွန့် မသိဘူး မထင်နဲ့နော်အပတ်စဉ် သတင်း ဂျာနယ် ၁၃ စောင်ဖတ်ပါတယ်။ Eleven ကိုလည်း ၀ယ်ဖတ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့မီဒီယာကြီးကို ဘယ်ချန်ထားမလဲဗျာ ......
မှတ်ချက် ။ ။ FB Page ပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ ကို ပြန်တုန့်ပြန်ရင် လေသံကိုလျော့ပါ။မပြောတတ်တော့ ဆဲသလို ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင် မောင်ဇော်မင်း လို ခေါင်းပေါင်းကဖြင့်တလူလူ .....း))
သူများကျတော့ မျက်နှာမပါလို့တဲ့။ သူ့မျက်နှာကတော့ E ကပ်လို့။ ပြောတာတော့ ၀ဖ ပဲ ... ဟုတ်မဟုတ် ကတော့ မသိ။ Boss ကို အဖေလို ချစ်တာကတော့ ချီးမွမ်းစရာ အမှန်ပါ .....
Aung Ph Zaw မှန်လိုက်လေ..ဒီမိုဖက်တီးရေ...မှန်တာပြောရင် ကျွန်တော်လည်း အရင်က EMG ပရိတ်သတ်ပါ....ဒါပေမဲ့ နောက်ပိင်းမှာ EMG ကို အမြင်ကတ်လာတယ်..(အရာရာကို အဆိုးမြင်တာ များလာတယ်... EMG ကသာ ဝေဖန်မယ် ငါ့ကိုတော့ လာမဝေဖန်နဲ့ ဆိုပြီး ဖြစ်လာတယ်...) ဒီမိုပြောချင်တာ ကျွန်တော် ပြောချင်တာတွေနဲ့ ကွက်တိပဲ..သူတို့က စတုထ္တမဏ္ဍိုင် ဖြစ်သလို ပြည်သူကလည်း ပဉ္ဇမ္တမဏ္ဍိုင် ပါဗျာ...မှားတာတွေ့လို့ ထောက်ပြတာကိုတော့ လက်ခံရင်ခံ..မခံရင်လည်း ကျိုးသင့် ကြောင်းသင့် တော့ ဖြေရှင်းသင့်တာပေါ့...(ခုတော့ ကတ်ကတ်ကိုလှန်နေတာပဲ..) ခုဒီ သမိုင်းအမှားအား ကန့်ကွက်ခြင်း ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကလည်း ပြည်သူတွေ နဂိုကတည်းက သိပ်အမြင်မကြည်ကြတဲ့ MMTimes ကို ချနင်းပြီး ဘာမှမဆိုင်တဲ့ သူတို့ CEO ကိုကြော်ညာဝင်တာပါ.......... ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ ကို မစဉ်းစားပဲ.. EMG ဘာလုပ်လုပ် လက်ခုပ်တီးမယ် ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတချို. (တချို. လို့တာပြောရတာ.. အမှန်က တော်တော် များပါတယ်..) ကြောင့်လည်း ခက်ပါတယ်...EMG လည်း အမြင် မှန်ပါစေ...ပြည်သူတွေလည်းအမြင်မှန်ပါစေ........... (အားလုံး လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်..)
Nyo Gyi Boss ကို အဖေလို ချစ်တာကတော့ ချီးမွမ်းစရာ အမှန်ပါ ..... :)
Ye Myat Thu ဓာတ်ပုံ Scan တွေ တင်ကတည်းက သတိပြုမိ စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့ ကံကို တည်ဆောက်နေတဲ့ သူတို့စေတနာ တွေ အကျိုးပေးသွားမှာပါ။
Thurein Maung Maung မောင်ရှင်လောင်းထမ်းတဲ့ ကပ်ရက်လူ နှစ်ယောက် ထမ်းရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမရောက်ခင် ရန်ဖြစ်နေကြသလို ဘဲ.... ဘယ်က စ အီးပေါက်လဲတော့သိဘူး ... မောင်ရှင်လောင်းလေး ဘုန်းကြီးကျောင်း ရောက်ပါစေအုံးဗျာ... ဒီပွဲလေးက အရေးကြီးလို့ ပါ...
ဒီမို ဖက်တီး ကိုရဲ နဲ့ တနေ့က ဆွေးနွေးခဲ့သလိုများ နေရာယူချင်တာတို့ ၊ ကျေးဇူးဆပ်ခံချင်တာတို့များ ဖြစ်နေမလားလို့ .....
ဒီမို ဖက်တီး Pandora Herz ကိုမေးကြည့်ပါ။ ကျုပ်တောင် ဘာမှ မမန့်ရသေးဘူး ... သူတို့ဘက်က ချိန်းခြောက်တဲ့ အဆင့်အထိ ရောက်သွားပြီ။
PR မတတ်တဲံ မီဒီယာလို့ ပြောရမှာပဲ ......
Zaw Thura ဘာများဖြစ်နေတာလဲလို့ ...အဖြစ်က ဂလိုကိုးး၊ဖက်တီးရေ...အရေးအကြောင်းရှိလာရင် ပြေးဖို့ ...အဲ့ မဟုတ်ပါဘူး လှုပ်လို့ ရှားလို့ လွယ်အောင် ၀ိတ်ချထားဖို့ တော့ လိုမယ်နော်..။
Ye Myat Thu ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ တိုက်နေတဲ့ စနစ်ကလူတွေမှာရှိတဲ့ အကျင့်မျိုး အတူတူတိုက် နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆီမှာ ရှိနေတာ ရတက်မအေးစရာဘဲ။
Steven Yeo သူ့လူကို ပါဆင်နယ် ကိုးကွယ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူဌေး လို့ဆိုရမယ်..
Yesterday at 7:56pm ·
Steven Yeo အလဲဗင်းကတော့ စထွက်ကတည်းက ၀ါဒဖြန့်ဆန်လွန်းတယ်လို့ ထင်တာပါဘဲ..
ခင် သံလွင် အဲဒီအရူးတွေကလဲတမျိုး... အရေခွံပါးမှတော့နိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့.... ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်.... သခင်အားရကျွန်ပါးဝခေတ်မရှိဘူးထင်းနေတာ..
Tin Latt ‎Ye Myat Thu ပုံစံခွက်တူတော့ သူငယ်နာ စင်ဖို့ ခက်တယ် ကိုရဲ။
Aungmyo Tun ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ပျော်သလို လုပ်ကြဗျာ...။
Ye Min Tun ‎ဒီမို ဖက်တီး ရေ့ :D
Zaw Htun Naing ‎@Tin Latt နေထူးနိုင်(11 senior editor) က ဝေမှူးသွင် ကိုအပြောမှာ ကျနော်စဉ်းစားနေတာနဲ့ အကိုပြောတာ တ၀က်တော့တူသွားတယ် :)
Tin Latt An error occurred while writing to our database. Please try again later.
Tin Latt ‎Zaw Htun Naing I got the above error message when I tried to like your post; there must be some shock. Be careful, Bro. ;)
ဒီမို ဖက်တီး စနစ်ကို တိုက်နိုင်မှ အကျင့်ကို တိုက်နိုင်မှာ ....
ထောင်ချမယ် ၊ တရားစွဲမယ်တို့ ဆိုတာ နအဖ က ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သလိုမျိုးပဲ ...
ဘာကြောင့် လက်နက်ကြီးနဲ့ပဲ ထုချင်နေရတာလည်းတော့ မသိဘူး ...
Myo Sam အကျင့်ကြောင့်...
Kyaw Aye မီဒီယာသည်ပြည်သူ့အတွက်လား။
ဒီမို ဖက်တီး Steven ပြောသလို .... Boss တယောက်ဟာ အရမ်းလည်း ဆိုးမယ် ၊ အရမ်းလည်း ကောင်းမယ် ဆိုရင် သူ့ကို ကြောက်တာ ချစ်တာတွေ ရောမွမ်းပြီး ကိုးကွယ်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်သွားမှာပါ ......
Kyaw Aye eleven က အယ်ဒီတာဇော်သက်ထွေး အကြောင်းသိကြရင်ကြပါဦး။အဲဒါကလည်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လို့ကြားဖူးတယ်
Hla T. Minn ကိုယ့်ကိုယ်ကို မောင်ဝံသ လိုစိတ်ကြီးဝင် ခြေလွင်္ပလက်လွတ်ေ၇း တဲ့ကောင် ပိတ်တာနဲသေးတယ်။ ဟ ဟ ဟာဟား
ဒီမို ဖက်တီး ဟေ ... ငါကို ပြောတာလား ကိုလှ ....း))
ကို သုကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နတ်နေကိုင်း ဖြစ်နေပြီလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်ထင်ပ။ နတ်နေကိုင်းက နတ်တော့ မဟုတ်သေး။
Aung Si Thu FB Page ပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူကို ပြန်တုန့်ပြန်ရင် လေသံကိုလျော့ပါ ၊>>>> ဆိုတဲ့စကား သိပ်ကြိုက်တယ်. .ဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုလဲ အဲ့ဒါကြောင့် သောက်မြင်ကတ်တာ
Thiri Su ‎88 မှာပါတိုင်းလည်း အထင်မကြီးပါ 88 အရေးတော်ပုံဟာတစ်ယောက်ထဲတော်လှန်ခဲ့တဲ့အရေးတော်ပုံမဟုတ်ပါ
Kaung Myat Min အနူတွေက ဘယ်နားထိထိနာတော့တာပဲ။ သွားရိုက်မနေနဲ့။ ပြင်သစ်က ဆုယူထားတာ ပူပူနွေးနွေးပဲရှိသေးတော့ မာန်တတ်နေပုံရတယ်။
အိမ် အိမ် အဲဒါလား မီဒီယာသမား ... ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန် ဝေဖန် အဲဒီဝေဖန်ရေးမှာ ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာပါတယ်ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းတယ်။ ငါပြောတာပဲလုပ် ငါလုပ်သလို လိုက်မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကတော့ ... ....
Aung Myint Zaw WHY WE WE RE NOT DESERVED TO DEMOCRACY...?COS OF CONSERVATIVE MYANMAR CULTURE IDEAS...... WHY WHY.. NOT ONLY THEM BUT.... YOUR MIND.... MY. ALSO
Ko Win Naing ၈၈ဆိုတာ အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ အားလုံးလိုလိုပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ၊အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် နိုင်ငံရေးဆက်မလုပ်ကြသူတွေအများကြီးပါ။၈၈ ပြီးတဲ့နောက်မှာ ခုချိန်ထိ ခံယူချက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ ၈၈ မှာ ထင်ရှားခဲ့ပြီးရန်သူဘက်သားဖြစ်သွားသူတွေ အများကြီးပါ။လက်ညှိုးထိုးပြလို့ရပါတယ်၊EMG ကိုပြောချင်တာက စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ပီသပါ၊ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုလေ့လာပါဦး၊---လို့
Yeyint Nge တရားပါစွဲအုံးမယ်ဆိုပဲ....:D
အကောင်းနဲ့ တမဒ ရာဒူးပေးဒါကို...
Tin Aung Khaing ၈၈ မှာကျောင်းသားခေါင်းဆောငလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေ အခုကြံ့ဖွံ့မှာ ရာထူးကြီးယူထားတယ်.....
Nan Thandar Aung အဝေဖန်မခံနိုင်ရင်တော့ မီဒီယာ မလုပ်စားတာပဲကောင်းပါတယ်။
Nan Thandar Aung မာန်တတ်နေတယ် (publci complaint ပြင်သစ် ဆုက just throw par)
Nan Thandar Aung PR မတတ်တဲံ မီဒီယာလို့ ပြောရမှာပဲ
Nay Wai ဟိုး အပေါ်စာအရဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အမိယုတ်သားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကိုနေမျိုးဝေယူဆ
အပေါ်က မူရင်းစာအဒူရေးမှန်းမတိ စာအရဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အမိယုတ်သားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကိုနေမျိုးဝေယူဆ ...See More
ဒီမို ဖက်တီး ဘာမှ မဆိုင်ဘူး ကိုနေမျိုးဝေ .... အခုဟာက ကြမ်းတာထက် ရမ်းတာ ပိုများတယ် .....
ဒီမို ဖက်တီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ သခင်ကုယ်တော်မှိုင်း ကို သူတို့လို ဖြုတ်ကောင်တွေနဲ့ မနှိုင်းပါနဲ့ ကိုနေမျိုးဝေ ...... Topics က မတူဘူးလားလို့ ......
Thu Ra Myo သူ့ဖေ့ဝေါမှာ E ပုံကြီးအကြီးကြီးတင်ထားပြီးဆရာကြီးလုပ်လို့ Eဆရာကြီးလို့ ခေါ်မိတာ အနော့ကိုဘလော့တယ်..ခွီးခွီး E ပေါလောကြီး Eပေါလောကြီး
Khin Kalayah Soe လေပါတယ်ဟယ် ... ဒီမိုရယ်.. ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။:D
Cho Tu Zal ‎:)
Kyaw Kyaw Htun ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ် ခဏထား အဲဒီလိုရေးထားဖတ်ပြီးတော့ EMG ကို boycott လုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် EMG အချိုးမပြေတာတွေများနေပြီ
ဒီမို ဖက်တီး ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရေ - မဖတ်နဲ့ ၊ မလာနဲ့ ၊ မပြောနဲ့ တဲ့ .......း)
ဒီမို ဖက်တီး ဒါရိုက်တာ ချို ... ဘာလို့ ရီနေတာလဲး))
Yin Tun ဒီ ဒွန္ဒာယာထဲမှာ လူယုတ်တွေဟာ ငွေအသပြာနောက်ကို ငမ်းငမ်းတက်အောင်လိုက်ပြီး၊ချမ်းသာလာတော့ အာဏာမက်လာတယ်။ဒီလိုမျိုး ဗာလာနံတွေက သူတို့အတ္တအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ခုတုံးလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူး။
Ni Lynn Boss ကို အဖေလို ချစ်တာကတော့ ချီးမွမ်းစရာ အမှန်ပါ ...:)
Yin Tun ဘောစိကိုအဖေခေါ်ချင်နေမှတော့ ....အာမပြောတော့ဘူးဗျာ။ ရှက်လို့။
Ni Lynn တစ်ဆယ့်တစ် ဂျာနယ် အလုပ်မဟုတ်သလို့ ချောတိုင် အီးမျက် အုပ်စုကလဲ ထူးမခြားနားပါဘဲ၊ ဆူညံမှုစာစောင်ကနေ ကိုယ့်လူတွေ ကျေညာတာလေ၊ တကဲ့လူတွေနဲ့ရော ပွဲထုတ်တာ ဘာ ဟန်ယောင်ဝါး တို့ ငါးသူဌေးတို့
Ni Lynn ချင့်သာယုံကြပါဗျို့ ဂွင်သမားတွေအချင်းချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော် မသူတော်လုပ်နေတာ
First 11 ကနေ ဘောလုံးသမားတွေကိုပေးတဲ့ဂုဏ်ပြုဆုငွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ ဆိုတဲ့ဟာကနေ စပြီး EMG ကို သတိထားမိတယ်။ မင်္ဂလာဈေး မီးလောင်တော့ လောင်လောင်ချင်းပဲ ချက်ချင်း သတင်းယူ ချက်ချင်း သတင်းတင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် EMG ကို အထင်ကြီးမိတယ်။ မလွတ်မလပ် ကာလမှာတောင...See More
Htay Tint EMG မှာ ကိုယ်စား တုန့် ပြန်စာရေးနေတဲ့ လူက လူငယ်ထဲကဖြစ်လိမ့်မယ် ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် တခြမ်းပဲ့အတွေးအခေါ်ကို ပြင်နေရတာ ။ အခုလို စာတွေ သူ့ ဆရာ သန်းထွဋ်အောင် ဆိုတဲ့ သူသိရဲ့ လားမသိပါဖူး။ သိပြီး ဘာမှ မပြောရင် တခြမ်းပဲ့ ဘဲဖြစ်မှာပါ ။။စစ်ဖိနပ်အောက်က မီဒီယာတွေကတော့ စစ်တပ်ဖါးတဲ့ကောင် ဥပေဒဆိုတာ သူတို့ လက်ထဲမှာလေ ။
ဒီမို ဖက်တီး ညီထွေးပြောတာ မှန်ပါတယ်။ မီဒီယာ တခုလုံးဟာ ဘော့စ်တယောက်ထဲ ကိုပဲ ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ Chief Editor တွေက နွားတွေလားးးးး
‎"ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ ။ Pandora ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါက သမိုင်းအမှားအား ကန့်ကွက်ခြင်း ဆိုတဲ့ Note မှာ မြန်မာတိုင်းမ် နဲ့ Eleven က သူေ၎းတွေ သမ္မတဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကွန်မန့်ရေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က နောက်ကလိုက်ပြီး Eleven CEO ကိုပဲ သမ္မတအဖြစ် မဲပေးမယ်လို့ပဲ ကွန်မ...See More
ဒီမို ဖက်တီး ဟိုးတလောကတော့ "လူထုဦးစိန်ဝင်းရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ခါးစောင်းတင်ထားမှ တော်ရာကျမယ်" ဆိုတဲ့ ဖားဆောင်းပါးကို ဝေဖန်မိပါတယ် ....း))
Chessy July EMG စောက် ကြောက်
Chessy July ဒီလိုသာဆိုရင် ခဗျားတို့ ဂွမ်းလိမ့်မယ်နော်
Ko Htet မီဒီယာ တခုအတွက် အပတ်စဉ် လှုပ်ရှားနေသူတွေဟာ ဂျာနယ်ပိုင်ရှင်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်က
၀န်ထမ်းပေါင်း များစွာ စာရေးဆရာပေါင်း များစွာပါ။ ကိုယ့်ဂျာနယ် လောကသား အချင်းချင်း အနည်းငယ်
Pandora Herz မီဒီယာလောကမှာ နေရာယူချင်တာထက် ပိုနေတယ်ထင်မိုလို့ ၀င်ရေးမိတာပါ။ ချိန်းခြောက်တဲ့ထဲ မပါလို့ :D.. ဒီမိုဖက်တီးကိုတော့ ဘယ်တည်းက အစာမကြေဖြစ်နေလဲမသိဘူး ပေါက်ကွဲလိုက်တာများ ရယ်တောင်ရယ်ချင်သွားတယ် :D
ဒီမို ဖက်တီး ရယ်ပါ Pandora ရယ်ပါ ....း)
Hlaing Myo Aung သူဌေးကြီးကိုတေဇ ကလည်း ၈၈ မှာ ပါခဲ့တယ်။
EMG ကိုသန်းထွဋ်အောင် ကလည်း ၈၈ မှာပါခဲ့တယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးလုံး အခု ချမ်းသာနေပါပြီ။
Pandora Herz ဒီမိုပေါက်ကွဲတာကို ရယ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဆတ်ဆတ်နာပြီး အယ်ဒီတာကြီးပေါက်ကွဲနေတာကိုပြောတာပါ :D
ဒီမို ဖက်တီး အလုပ်မလာခင် မိန်းမနဲ့ ရန်ဖြစ်လာတာလားမှ မသိတာ ....း))
Michelle Phyo ELEVEN MEDIA GROUP ကို 100% ထောက်ခံပါသည်
Arkar Kyaw မီဒီယာ က သတင်းတွေချပြ
ဝေဖန် သမျှ တုန့်ပြန်နေရင်တော့ သတင်းတွေချပြရမယ့် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီး အလွဲတွေ ဖြစ်ကုန် တော့မပေါ့ ...... ဒါ စလွဲတာပဲ ။
ဒီမို ဖက်တီး ‎111% ထောက်ခံပါ မစ်ရှယ်ရယ်း(
Thura Aung pls share...
Salai Zamte EMG က အယ်ဒီတာ ဝေဖြိုးကို သွားမပြောနဲ့။ သိပ် သတ္တိကောင်းတာ။ ၂၀၀၉ တုန်းက သူတို့ဂျာနယ်မှာ ပါတဲ့ သတင်းတခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အင်တာဗျူးတာ "ဂျာနယ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်းပဲ ယူလိုက် ရေးလိုက်ပါတဲ့ ကွန်မန့်တော့ ပေးနိုင်ဘူး" ဆိုပဲ။ ကျနော်က "နာမည်တွေ ဘာတွေလည်း မသုံးပါဘူး။ နီးစပ်သူတဦးလို့ပဲ သုံးမှာပါ" ဆိုတာတောင် မရဘူး။ အဲ့လောက် သတ္တိကောင်းတာ။ ဟဲ ဟဲ
Kaung Myat Soe aww EMG mar Yan Thu5myo taung shi tal so bal..........:D
Kaung Myat Soe Boss ကို အဖေလို ချစ်တာကတော့ ချီးမွမ်းစရာ အမှန်ပါ .....Baw ka pite pite pay htar tar ko naw.................:P
Win Latt ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ အနာဂတ် သမ္မတမှန်းနေသူ နှစ်ဦးရှိသဗျ။ ဆရာဝန်တွေပေါ့ဗျာ။
မနက်က EMG ရဲ့ အဲဒီဆောင်းပါးအောက်မှာပဲ ဒီလိုလေး ကွန်းမင့်ပေးခဲ့ပါတယ်.. ဒီညနေပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ မရှိတော့ပါဘူး.. ကျွန်တော်လည်း ကွန်းမင့်ပေးလို့ မရတော့ပါဘူး..
EMG ခင်ဗျာ.. သူများအပုပ်ချလို့ စာဖတ်သူတွေ အထင်လွဲကုန်မယ်ဆိုတာ ဒီကိုလာဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေကို အထင်သေးရာ ရောက်ပါတယ်.. EMG အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း ဒေါက်တာသန်းထွတ်အောင် အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း မှားရင်လည်း မှားပါလိမ့်မယ် (ဒီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ.. ဘယ်ကိစ္စမဆိုဖြစ်ပါတယ်) ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက်ကြောင့် တလျောက်လုံး လုပ်လာခဲ့တာတွေကို မထိခိုက်ပါဘူး.. မှားခဲ့ရင်တောင် စေတနာကို ကျွန်တော်တို့လေးစားလျက်ပါ... ငါ့ကိုမကြိုက်ရင် ငါ့စာလာမဖတ်နဲ့လို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး.. မဖတ်နဲ့ဆိုလည်း ဖတ်ရမှာပါပဲ.. မဝေဖန်နဲ့လို့လည်း တားလို့မရပါဘူး.. ဝေဖန်ရမှာပါပဲ.. facebook ပေါ်ကသူတွေဟာ watchdog တွေပါပဲ.. (အစိုးရလိုပဲ မင်းတို့ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က လူလက်တစ်ဆုပ်လောက်ပဲလို့ ယူဆရင်လည်း ရပါတယ်..).ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဲ ဝေဖန်ဝေဖန် စာကိုပဲဝေဖန်ဝေဖန် ကျွန်တော်တို့ ပရိတ်သတ်တွေက သူများပြောတိုင်း မယုံပါဘူး.. အဲဒီလိုပဲ EMG ပြောတိုင်းလည်း ယုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. စဉ်းစားပြီးမှ ယုံကြတာပါပဲ.. တကယ်က ဒေါက်တာသန်းထွတ်အောင်မှ EMG မဟုတ်ပါဘူး.. EMG က ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်စီတိုင်းဟာ EMG ဖြစ်နေရမှာပါ.. ပရိတ်သတ်ကို တုန့်ပြန်တဲ့နေရာမှာလည်း ပြတ်သားတာနဲ့ ကြမ်းတမ်းတာ မတူပါဘူး..ဒီထက်ပိုပြီး ပါးပါးနပ်နပ် တုန့်ပြန်ဖို့လိုတယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ..2 seconds ago · Like
နေပြည်တော်ရုံး ၃၂ မှာ အဆောက်အအုံလေလံကြမ်းခင်းဈေးသိရဖို့ အဆောက်အအုံတခုကို ငွေ ၃၀၀၀၀ ပေးပြီး ပျဉ်းမနားမှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲ မန်နေဂျာက တဆင့် လာဘ်ထိုးပြီး ကြည့်ခိုင်းတာ ဘယ်သူလဲ။ ကား အစင်းပေါင်းများစွာ ဥပဒေနဲ့မညီသွင်းပြီး အကောက်ခွန်ကစစ်တော့ ဂျာနယ်ထဲ ထည့်ရေးတာ ဘယ်သူလဲ။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်း မိန်းကလေးတွေကို ရဲကို ငွေပေးပြီး ဖမ်းခိုင်းတာ ဘယ်သူလဲ။ အမှုဖြစ်တော့ ရှေ့နေ့ချုပ်ရုံးက လြူကီးကို ပျဉ်းမနားမှာနေတဲ့ ရှေ့နေချုပ်ရုံးက လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(အလွတ်သတင်းထောက်လည်း လုပ်သည်)က တဆင့် ပြည်ထောင်စုဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးကို လာဘ်ပေးတာ မအောင်မြင်လို့ တရားစီရင်ရေးစနစ်မကောင်းကြောင်းရေးတာ ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်ဂျာနယ်လဲ။ မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ ကြာပြီ သိရဲ့လား။ သာပေါင်း ညာစားရဲ့။ မင်းအကြောင်းပြောမကုန်ဘူး သိလား။
ဒေါက်တာ နေ၀င်းမောင်တို့ကို အံ့သြတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ုကို မဆီမဆိုင်ကိုက်နေ၊ ဟောင်နေတာကို သည်းခံနိုင်တာ။ ပညာရှိပီသတယ်ဗျာ။ စနေမှာ The Voice မဖက်ရရင် မနေနိုင်တဲ့သူပေမယ့် တနင်္လာမှာ ဘာ မဖက်ရ၊ ဖက်ရ နေတက်တယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြည်သူတွေက The Voice ကို သာဓုခေါ်နေတာ မနာလိုတဲ့ မီဒီယာက ရှိသကိုး။ ကိုယ်က အဲလို လုပ်နိုင်စွမ်းကမရှိ။ အင်္ဂလိပ်လိုကလည်း မထုတ်နိုင်။ ပြောရရင် ၂၀၀၈ တုန်းက ဂျာမဏီသံရုံးက ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖိုး ကြော်ငြာထည့်သတဲ့ အဲဒီဂျာနယ်မှာ။ တိုက်က သတင်းထောက်တွေ ဘာသာပြန်တာ သောက်တလွဲဆိုတော့ သံရုံးက သူက ငါးဒေါ်လာမတန်ဘူးပြောသွားတယ်
Aung Naing Oo ထစ်ကနဲရှိတရာစွဲမယ်...နှစ်ရာစွဲမယ်နဲ့.....သူ့ကိုယ်သူ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးမီဒီယာဆိုပြီး မာန်တက်နေလေရဲ့...
Aung Naing Oo ဘယ်တော့စွဲစွဲ သူတို့ပဲ အရှက်ကွဲပြီး ဂွမ်းတာပဲ...ရှုံးတာပဲ...ဟားဟားဟားဟား
Aung Naing Oo သူတို့ကိုသူတို့ ပြည်သူ့အတွက်ဆိုပြီးကြွေးကြော်တယ်...ပြီးတော့ သူတို့ပဲ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ပြည်သူ့လက်ခုပ်သံကို ယူချင်သေးတယ်...
Aung Naing Oo ခွေးဆိုတာ သူများကိုပဲကိုက်ချင်တာ ....သူ့ကိုဆို ကိုက်ဖို့မပြောနဲ့.... ဟောင်ရင်ကို မကြိုက်ဘူး...ရပါတယ်လေ...ဒါဟာသဘာဝပဲလေ...